डोजरको इन्धनमा पानी मिसाएको बिषयमा अजीरकोट गाउँपालिकाको बैठकमा तनाब - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २४ आश्विन २०७८, आईतवार २०:३२
गाउँपालिकाको डोजरको इन्धनमा पानी मिसाएर प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेपछि अजीरकोट गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा तनाब सिर्जना भएको छ ।
पानी मिसिएको इन्धन प्रयोग गरेका कारण गाउँपालिकाको डोजर बिग्रिएपछि आक्रोशित भएका कार्यपालिका सदस्यहरुले सो इन्धन ल्याउने दुई करार र एक स्थायी कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए ।
बैठकमा चर्काचर्की भएपछि आक्रोशित भएका गाउँपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र धिताल वडाअध्यक्ष जंगबहादुर गुरुङतर्फ आक्रोशित भएर लम्किएका थिए । आफूतिर आइरहेका प्रमुख धितालतर्फ लक्षित गरी वडाअध्यक्ष गुरुङले कुर्ची उठाएर फ्याँकेपछि स्थिति थप तनाबग्रस्त भएको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रमाया गुरुङले बताइन् । अध्यक्ष धिताललाई कर्मचारीहरुले सम्झाइबुझाइ गरेर शान्त बनाएको उनले बताइन् ।
‘तेलमा पानी मिसावट भएका कारण डोजरको इञ्जिन सिज भएर थन्किएको छ । त्यसमा बदमासी गर्ने पालिकाको गाडीका ड्राइभर, कार्यालयका पियन र सहायक लेखापाललाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडदार माग राखेका थियौँ’, वडा नं. ४ का अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तीनघण्टासम्म चर्को आवाजमा कुरा उठ्दा पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एक शव्द बोल्नु भएन । त्यसपछि हामी सबैले उहाँले केही न केही बोल्नुपर्छ भनेर कराउन थाल्यौँ । त्यतिकैमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उठेर मतिर झम्टिन लाग्नुभयो । अनि मैले आफ्नो बचाउ गर्न कुर्ची उठाएर उहाँतर्फ फ्याँकेको हुँ । पछि कर्मचारीहरुले उहाँलाई फर्काएर लगे ।’
गाउँपालिकाले खरिद गरेको छसय लिटर ब्याकहुलोडर(डोजर)को तेलमा पानी मिसिएको प्राविधिकहरुले पुष्टि गरेका छन् । पानी मिसिएको तेल प्रयोग गर्दा बिगत १५ दिनदेखि सो डोजरको इञ्जिन सिज भएर थन्किएको उपप्रमुख गुरुङको भनाइ छ ।
सो बिषयमा छलफल गर्न आइतबार गाउँ कार्यपालिकाको बैठक आव्हान गरिएको थियो । ‘यस बिषयमा आज कुनै निर्णय हुन सकेन । अब दशैपछि अर्को बैठक गरेर निर्णय गर्ने समझदारी भएको छ’, उपप्रमुख गुरुङले भनिन् ।
तर गाउँपालिकाका प्रमुख धितालले भने बैठकमा बाहिर हल्ला भएको जस्तो कुनै अप्रिय घटना नभएको दाबी गरेका छन् । ‘बैठकमा सामान्य भनाभन, चर्काचर्की हुनु स्वभाविकै हो । त्यति मात्र भएको हो । अरु केही भएको छैन’, धितालले भने ।
गाउँपालिकाले दुई हप्ताअघि तनहूँको डुम्रेस्थिति ऋषि आयल स्टोर्सबाट तीन वटा ठूलो ड्रममा छसय लिटर इन्धन ल्याएर कृषि र पशु शाखाको भवनमा स्टोर गरेको थियो । सोही इन्धन प्रयोग गरेर डोजर चलाउँदा इञ्जिनमा समस्या आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।